Dowladda Federalka oo Isimada Puntland u dirtay codsi ka dhan ah Saciid Deni – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 11 April 2021
Dawladda Federaalka Soomaaliya (DFS) oo Isimada Puntland ka Codsanaysa dammaanad inay ka noqdaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in dawladda Federaalka ah ay qorshaynayso in la keeno magaalada Muqdisho Isimada Waa weyn ee Puntland si ay dammaanad uga noqdaan heshiis lala galo Deni iyo Inay mas’uul ka noqdaan inuusan mardambe meel uga dhaceyn sharafta iyo karaamada Soomaaliya.
Inta uu madaxweynaha ka noqday Puntland bilowgii 2019 waxaa xoogaystay khilaafka u dhexeeya Garowe iyo Muqdisho arintaas oo salka ku haysa dano shaqsiyeed iyo kuwo shisheeye.
Sidaas darteed, ayey DFS waxay qorshaynaysaa in Isimada Puntland loo caddeeyo masuuliyad dhankeeda ah sida adkeynta afarta qodob ee dastuurka (qodobka 54aad) ku cad oo ugu weyntahay ilaalinta faragelinta shisheeye iyo ilaalinta xuduudaha soomaaliya.
Inta la ogyahay xiriirka Isimada iyo Xukuumada Deni ma fiicna arintaas oo la sheegay in ay salka ku hayso dadka kooxaha ka tirsan sidoodaba ma aaminsana dhaqanka iyo xeerka soo jireenka ah ee Soomaaliyeed.
Lama garan karo Isimada Puntland Inay dammaanad ka noqon karaan madaxeeynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni.